Wasiirka Maaliyada Soomaaliya oo ka digay in la qaado canshuur aysan ka warqabin wasaarada Maaliyada – Radio Daljir
Wasiirka Maaliyada Soomaaliya oo ka digay in la qaado canshuur aysan ka warqabin wasaarada Maaliyada
Abriil 8, 2013 12:41 b 0
Muqdisho, 07 April 2013 Wasaaradda Maaliyadda iyo Qorsheynta Xukuumadda Soomaaliya ayaa soo bandhigtay qorshe dib u habeeyn loogu sameynayo nidaamka loo maamulo Miisaaniyadda Dowladda, ?
Wasiirka Maaliyada dawladda ?Federalaka Soomaaliya Maxamuud Xasan Suleyman ayaa sheegay in wasaaradu ku howlantahay dib u habeynta nidaamka miisaaniyada dowlada, ?iyadoo la dhameystirayo wixii ku baxaya gaar ahaan kharashaadka iyo iyo dhinaca aqoonta.
Dhanka kale wasiirka ayaa ka digay in dib loo soo celiyo Jidgooyooyinkii lagu qaadi jiray lacagaha sharcidarada ah Waxaan maqlay in degmada Balcad la dhigay jidgooyo magaca wasaarada dhaqaale looga qaado, ?shalay ayaan maqlay arintaasi maantana waxaan saxiisay go?aankii arintaasi lagu joojinayay?? Sidaasi waxaa yiri wasiirka Maaliyada Maxamuud Xasan Suleymaan.
Wasiirka Maaliyada ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed iney bixiyaan canshuurta dowlada, ?isagoo hoosta ka xariiqay in wasaaradu ku dadaaleyso sidii ay shacabka ugu fududeyn laheyd bixinta canshuuraadka.
Golaha Wasiiradda oo kulan amaanka iyo digniintii Britan looga hadlayo ku yeeshay Muqdisho
Caawa iyo Daljir, Axad Arpril, 7 -2013, Cabdifataax Cumar Geeddi ‘ (Daljir Garoowe)